Senataro Aqalka Sare ee Mareykanka oo qiray in Amiir Maxamed bin Salman uu amray dilka Khashoggi (Daawo) – Radio Daljir
Senataro Aqalka Sare ee Mareykanka oo qiray in Amiir Maxamed bin Salman uu amray dilka Khashoggi (Daawo)
Diseembar 4, 2018 8:53 g 0
Xaalka Madaxweyne Trump iyo Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa meel xun saacado kahor ka degay kaddib markii Senataro sare oo xisbiga Jamhuuriga ee Trump ay ka biyodiideen hadalkii Trump ee ahaa in aan la hayn qori qiiqaya oo muujinaya in Amiirku uu ka danbeeyey dilka Khashoggi.
Senator Lindsey Graham oo ka soo baxay warbixin madaxa CIA-da, marwo Gina Haspel, horena u muujiyey dareenkiisa iyo in uu Amiirku ka danbeeyey dilka iyo jarjarka Khashoggi lagu dhex jarjaray qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul, Turki, ayaa asaga oo Trump u jawaabaya waxa uu yiri, “qori qiiqaya warkiisa daa e waxaan haynaa xaqiiqada miishaar qiiqaysa … waxaan hadda ka soo kacay warbixintii CIA-da anoo kalsooni saa’id ah ku qaba in aan markii horeba saxnaa.”
Senator Bob Corker oo asna ka soo baxay isla warbixinta madaxa CIA-da ee Agaasime Gina Haspel oo Trump uu hore iskugu dayey in uu baajiyo ayaa yiri, “Amiir Maxamed baa dilay Khashoggi. Haddii markii hore ay hubanti la’aani jirtay, hadda iga hooya waa hubaal rasmi ah. Asagaa dilay.”
Asbuucii la soo dhaafay ayaa Madaxweyne Trump waxa uu dagaal adag u galay in uu warbixinta CIA-da baajiyo, xisbigiisana ka dhaadhiciyo in Amiirku uusan dilin Khashoggi. Trump oo kaashanaya Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda iyo kiisa Difaaca ayaa hadda saddexdoodu ah ragga kaliya ee weli taageeraya Amiir Maxamed bin Salmaan.
Saadaashu uma qurux badna Trump iyo Amiir Maxamed bin Salmaan maadaama Aqalkii Sare ee Jamhuuriga ahaa hadda ay muujiyeen in Amiirka lala xisaabtamo; halka Aqalkii Hoose uu gacanta xisbiga Dimoqoraadiga galay.
Labada aqal ee Dowladda Mareykanka ayaa hadda si toos uga horyimid siyaasadda Madaxweyne Trump iyo tan Amiir Maxamed, sidaas darteed mar kastana waxaa la filan karaa ciqaab adag oo ku aaddan Amiir Maxamed iyo Dowladda Sucuudiga.
Xukuumadda Madaxweyne Farmaajo ayaa si toos ah u taagertay Dowladda Sucuudiga, si dadbanna u beenisay in Amiir Maxamed uu lugta la galay wax fal danbiyeed caalami ah.
Halkan Kadaawo Warbixin An ka diyaarinay Wararkii ugu dambeyeey ee dilkii khashoggi
Daljir kala soco wararkii ugu danbeeyey ee dilka Khashoggi.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 486 Wararka 22270